Ciidanka Eswatini ee masuulka ka ahaa halka wadahadalada SADC ay noqon karaan been abuur
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jebinta Wararka Eswatini » Ciidanka Eswatini ee masuulka ka ahaa halka wadahadalada SADC ay noqon karaan been abuur
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Eswatini • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • Wararka Dowladda • News • Ammaanka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Cinwaanka Times of Swaziland 4-ta Luuliyo oo sheegaya in Ciidanka ay la wareegayaan xukunka
Ciidanka Eswatini ayaa laga yaabaa inay la wareegeen waxayna u badan tahay inay joojiyaan dhamaan mudaharaadyada, sidoo kale kuwa leh cabashooyinka nabadeed. Xaaladda ayaa hadda deggan, laakiin Internetka ayaa umuuqda inuu xiran yahay subaxnimadii Isniinta.
Sida laga soo xigtay eTurboNews ilo xaalada boqortooyada Eswatini way dagan tahay, halka internet-ka uu wali xiran yahay inta badan.
Sida laga soo xigtay Times saaxiibtinimo Times ee Swaziland, ciidanku wuxuu mas'uul ka yahay Boqortooyada waqtigan.
Wasiirada SADC waxay gaareen Eswatini waxayna wadahadal la yeesheen saraakiisha Dowlada iyo Ururada Bulshada Rayidka maalintii Axada, qaarkood waxay u arkaan inay tahay qaris ama been abuur.
Sarkaal sare oo dowladda ka tirsan ayaa u sheegay eTurboNews:
Muqaawamada waa khiyaano maadaama ay ku soo labisan yihiin dareeska ciidanka. Burburku wuxuu ahaa mid aad u weyn oo ku dhow 30 dhimasho, inta badan bililiqeystayaashii ka cararay dukaanka dukaanka ilaa dukaanka. Qaar ka mid ah milkiileyaasha dukaanku waa inay isdifaacaan.
In kasta oo intarnetka inta badan laga xiro Boqortooyada Eswatini, haddana Ciidanka Difaaca Umbutfo Eswatini (UEDF) waxay ku wargeliyeen qaranka Eswatini in ay noqon doonto meel dalka oo dhan laga daawado marka loo eego qalalaasaha jira, weerarada dab damiska ee lagu hayo guryaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dadweynaha. bililiqaysiga goobaha, dhibaataynta, iyo dilka dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan.
Ciidanka Difaaca Umbutfo Eswatini waa militariga rasmiga ah ee qaran ee hubeysan ee Boqortooyada Koofurta Afrika ee Eswatini. waxaa loo adeegsadaa ugu horreyn inta lagu jiro mudaaharaadyada gudaha, iyadoo leh xadka iyo cashuuraha qaarkood; xooggu weligii kuma lug yeelan khilaaf shisheeye.
The Times of Swaziland ayaa la daabacay Axaddii: Boqortooyada Boqorka ayaa ah Taliyaha Guud ee UEDF. Aragtidii ugu horreysay ee ciidanka oo la daad gureynayo waddooyinka dalka ayaa ahayd Talaadadii kadib markii ay mudaaharaadayaashu fuuleen meel xasaasi ah oo ay gubeen hanti, oo ay kujiraan dhismayaal iyo gawaari xamuul oo alaabooyin kaladuwan waday.
Joogitaankan waxaa lagu kordhiyay xitaa magaalooyinka, halkaasoo bililiqaysiga dukaamada iyo xayiraadda waddooyinka iyadoo la adeegsanayo dhagaxyo, qoryo iyo qashin qashin ay noqotay amarka maalinta. Shalay, Sarkaalka Xiriirka Dadweynaha ee UEDF, Lieutenant Tengetile Khumalo, oo ka amar qaata Abaanduulaha Ciidanka Jeneraal Jeffrey Tshabalala, wuxuu yiri 'ciidanka difaaca ayaa tan iyo markii ay la wareegeen xaaladda nasiib darrada ah'.
Waxay tiri tani waxay ahayd fulinta waajibaadka ciidanka, taas oo, iyo waxyaabo kale, ay tahay 'in laga caawiyo maamulka rayidka ilaalinta sharciga iyo kala dambeynta inta lagu jiro xaaladaha qasan sida tan.
“UEDF waxay ku faraxsan tahay inay la wadaagto dhammaan emaSwati tan iyo markii ay la wareegtay xaaladda, nabaddu dib ayey u soo noqotay. Ciidamada difaaca waxay si guul leh u ilaaliyeen naf iyo maal badan, kuwaas oo qarka u saarnaa burburka ay gaysteen dab damiyayaashu iyagoo isu ekeysiinaya 'mudaaharaadayaal', ”ayuu yiri Khumalo. Waxay ku nuuxnuuxsatay in UEDF ay sii wadi doonto fulinta howlaheeda muhiimka ah ee ilaalinta nolosha iyo madaxbanaanida Boqortooyada Eswatini. Waxay tiri waxay sameyn doonaan tan 'inkasta oo ololeyaal sumcad dil ah oo loogu talagalay in lagu sumcad bixiyo sumcadda aasaaskeenna'.
Abaanduulaha ayaa sheegay in ololaha sumcad xumida ah ay salka ku hayeen macluumaad ay si kalsooni leh ku aruursadeen in ay jiraan ajaaniib muqaawamo ah oo kaqeyb galaya dagaalada socda, kuwaas oo doonayay in ay toogtaan dad aan waxba galabsan oo ay eedda u wareejiyaan militariga. "UEDF waxay jeceshahay inay ka digtoonaato, shaqsiyaadkaan inay ka waantoobaan weerarada goos gooska ah ee ay ku hayaan shacabka aan waxba galabsan iyo weerarada dab qabadsiinta, si ay uga fogaadaan inay xirtaan dharka asturan ee noo eg," ayuu yiri Khumalo
Waxay u gudbisay codsigii ciidanka difaaca ee qaranka inay la shaqeeyaan 'ciidamadeena dadaalka badan ee ku sugan dhulka lana ixtiraamo dhamaan bandowga ay soo rogtay dowlada'. Khumalo wuxuu waalidiinta ka codsaday inay hubiyaan in caruurtooda ay guriga joogaan ilaa xaalada oo dhan laga saxayo.
"Xaqiiqdii, waalidiinta waxaa laga doonayaa inay caruurtooda uga digaan inay ku biiraan mudaaharaadayaasha," ayuu yiri ciidanka PRO. Khumalo oo sii hadlay ayaa sheegay in ciidamada difaaca ay marwalba ku haminayeen inay u shaqeeyaan sida ugu macquulsan uguna macquulsan, sidaa darteedna loogu yeeray dadka inay iskaashadaan. Waxay raacisay: “Kuwii u hogaansami waaya codsigeena, waxay la kulmi doonaan cadhada buuxda ee ciidamadeena. Umaddu waa inaysan argagaxin. Ciidanka difaaca ayaa u jooga inay qaranka u adeegaan. ” Ku dhawaaqida ciidanka ee ah inay tan iyo markii ay la wareegeen wadooyinka dalka waxay dhacayaan maalin un kadib markii machadka dimuqraadiyada iyo hogaaminta (IDEAL), oo ah urur samafal sameeya, ay codsi deg deg ah u gudbiyeen maxkamada sare iyagoo dalbanaya amar askarta ka saar wadooyinka.
Wadatashiyo socda oo wax looga qabanayo nusqaamaha ka jira Jamaica ...
Sida Loo Sameeyo Fasaxaaga Kireynta Naafo-Saaxiibtinimo